Halka: Imaaraatka Carabta | Wararka Safarka
Halka: Imaaraatka Carabta
Mariela Carril | | Imaaraadka Carabta, General
Muddo ilaa qaybtan ku jirta Bariga Dhexe Awood ayaa soo baxday oo hantideeda badani ka timaaddo dahabkeenna dareeraha ah, taas oo adduunka ka dhigaysa mid wareegsan xilligan: saliid. Waxaan ka hadlayaa Imaaraadka Carabta.
uu toddobo imaaradood kuwa ka kooban dalkan madaxbanaanida maantana wax yar ayaan xusi doonnaa sheekadiisa, laga bilaabo cidla ilaa xoolo, iyo fursadaha dalxiis inay maanta na siiyaan. Safar ku taga Jasiiradda Carabta, oo mar ahaan jirtay dhul duniyo iyo qabiilooyin isugu jira, maanta waa dal dhismeyaal dhaadheer leh iyo lacag.
1 Imaaraadka Carabta
2 Imaaraadka Carabta maanta
3 Isutagga Imaaraadka Carabta iyo dalxiiska
Waxaa jira toddobo imaaradood oo dalkan ka kooban: Dubai, Sarja, Ummu al-Qaywayn, Fujairah, Ajman, Abu Dhabi iyo Ras al-Khaimah. Sida Afrika oo kale, awoodaha reer Yurub wax badan ayey ku leeyihiin sameynta juquraafi siyaasadeed ee gobolka. Halkan sahamiyayaal Burtuqiis ah ayaa yimid qarnigii XNUMXaad, iyagoo raadinaya isla markaana furaya waddooyin loo maro Aasiya. Markii dambe, qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, waa Ingiriiska oo ka dhigay Gacanka Beershiya xarun muhiim u ah marinnada ganacsi ee ay maraan.
Dhinac reer Yurub, oo u hanqal taagaya inay furtaan ganacsi, dhinaca kalena qabiilooyinka carbeed ee la macaamilaya wejiyo kaladuwan maxaa yeelay marka lagu daro reer Yurub waxay ku sugnaayeen aaggii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Boqortooyadii Beershiya maxaa diidaya, burcad badeed. Waxaan horey u ogaanay taas Ingiriiska Waxay ku fiicnaadeen inay xukumaan adduunka, markaa qarnigii XNUMXaad waxay aasaaseen a maxmiyad dhulka imaraadka ee hada jira.
Saxeexida heshiisyada ugaasyada deegaanka, Heshiiska Guud ee Badaha 1820 kaasoo sheegay in Carabtu ay la wareegi doonto burcadbadeedda. Soddon sano kadib Xad-gudubka Badda ee Joogtada ah taas oo u saamaxday maraakiibta ingiriiska inay dhex mushaaxaan xeebaha. Kadib Ingiriiskii wuxuu ka baxay curcurka ilaa xusulka oo wuxuu gaadhay 1892 kii Heshiis Gaar ah taas oo Carabtu xiriir la yeelan karin quwadaha kale isla markaana Boqortooyada Midowday ay ku siisay soocelin dhuleed iyo doorbid ganacsi.
Waxaan ka hadleynaa qabiilooyinka carabta ee aan waagaas xitaa maqal macdanta dahabka ah ee ay ku dul dhaqaaqeen. Markaa waxay daaqayeen, kalluumeysanayeen oo ay soo ururiyeen luul. Waxay ahayd kadib Dagaalki Labaad ee Aduunka in meelaha saliida iyo gaaska. Kor u kaca ayaa bilow ahaa. Dagaalki wuu dhamaaday oo boqortooyadii ingiriiska waa lakala saaray sidaa darteed wadamadu waxay bilaabeen inay kala xaajoodaan madaxbanaanidooda.
UK waxay ka baxday 1968 iyo imaaraatku waxay isugu yimaadeen si ay u eegaan sida ay u sii socdeen. Dubai iyo Abu Dhabi ayaa kulmay oo casuumay maxmiyadaha Baxrayn iyo Qatar. Khilaafaadka soosocda ee ku saabsan qoyska reer Arab yaa masuul ka noqon lahaa ayaa sababay inay kala tagaan, laakiin sanadkii 1971-kii ayuu Imaaraadku dhashay, federaal cusub oo ka kooban lix xubnood. Ras al Khaima ma uusan joogin waqtigan maxaa yeelay wuxuu lahaa loolan dhuleed gaar ah oo lala galo imaarada Sarja, laakiin waxay ku biirtay sanad kadib.
Wuxuu ahaa Sheekha Abu Dhabi, Zayed bin Sultan al Nahayan, oo hayey xilka madaxweynenimada 1971 ilaa uu ka dhintey 2004. Isaga iyo hindisahiisa waxaa lagu leeyahay deynta casriga ah ee gobolka iyo isu dheelitirka awooda toddobada ehelka boqortooyada, oo ma fududa. Isaga oo gacmaha isula saaraya petrodollars, Imaaraatka Carabta ayaa galay a habka casriyeynta oo dhakhso badan '90-meeyadii oo markaa adhijirrada, burcad-badeedda, iyo kalluumeysatada luul waxay noqdeen kuwa hodan ah oo jilayaal siyaasadeed leh.
Imaaraadka Carabta maanta
Sida Midowga Yurub imaaraadka oo dhami isku mid maaha. Waxaa jira kala duwanaansho dhaqaale sababtoo ah goobaha saliida si siman looma qaybiyo. Tusaale ahaan, Abu Dhabi waxay xoogga saaraan ku dhowaad 90% iyo Dubai 5% iyaga ka mid ah. Sidoo kale, labadan gobol waxay leeyihiin diyaarado iyaga u gaar ah sidaa darteed waxay leeyihiin waddooyin ganacsi oo muhiim ah. Labadoodu waxay metelaan 83% ee GDP, markaa shanta imaaraad ee ugu yar waxay ku tiirsan yihiin iyaga iyada oo loo marayo canshuuraha federaalka.
Laakiin ma sahlaneyd in toddobo imaaradood la hoos keeno hal dowlad? Wax badan maahan. Dastuur ayaa la saxeexay 1971-dii wuxuuna jiray ilaa 1996, inkasta oo taasi markii hore ujeedku ahayn. Halkan waxaa lagu xaddiday taas caasimada waa Abu Dhabi marka loo kordhiyana waa amiirkiisa oo hogaamiya gobolka. Mar dambe, dastuurku wuxuu ka hadlayaa mideynta dhowr nidaam oo muhiim u ah dowlad gobol: canshuuraha, maaliyadda, waxbarashada, caafimaadka ... Marka lagu daro nidaamka garsoorka ee guud iyo ciidamada qalabka sida.
Maanta, kaliya Ras al Khaimah iyo Dubai waxay leeyihiin maxkamado iyaga u gaar ah waana la aasaasay ciidamada qalabka sida ee gobolka kuwaas oo kamid ah kuwa ugu awooda badan deegaanka. Wax walba waxaa gacanta ku haya Golaha Sare ee Federaalka kaasoo sanadkiiba afar jeer kulma. Dhammaan amiirradu waxay u safraan golahan wasiirradana waa la magacaabaa ama kuwa la ansixiyaa, jagooyinka waa la qaybiyaa, sharciyada iyo miisaaniyadda ayaa laga doodaa. Madaxweynuhu wuxuu magacaabaa fulintiisa, laakiin had iyo jeer wuxuu tixgeliyaa dhammaan imaaradaha.
Imaaraatka carabta ma doorashooyin baa ka jira? In yar Dawladdu waxay leedahay la talinta sharciga ee Golaha Qaranka ee Federaalka, oo ka kooban 40 xubnood, oo ka kala socda toddobada imaaradood, oo qayb ahaan lagu doorto doorashooyinka. Kaliya in ka badan 300 oo kun oo qof ayaa codeyn kara waxaana soo xushay guddiga doorashooyinka qaranka oo tixgelinaya galmada, da'da, tababarka iyo goobta uu ku nool yahay.
Sidaa darteed, tusaale ahaan, doorashadii 2006, tii ugu horreysay, kaliya 6 kun oo haween iyo rag ah ayaa ka qeybgalay. Maanta tiradu way ka badan tahay oo sanadkii 2011 waxay ahaayeen 130 kun iyo 300 kun sanadka 2019. Oo dumarka? Hagaag, codad aad uyar ayaa doorashadii sanadkii hore waxaa jiray qiyaastii 180 in lagu doorto jagooyinka qaar, in kastoo toddobo kaliya ay awoodaan inay sidaas doortaan. Magac ahaan, waxaa jira toddobo haween ah oo ka tirsan Golaha Qaranka ee Federaalka.
Runtu waa tan shareecada, Shareecada islaamka, waa maxay wuxuu xukumaa oo uu xaliyaa nolosha bulshada iyo siyaasada dalka. In kasta oo imaarad kasta ay leedahay darajadeeda ismaamulka, haddana ma jiraan wax ka hor imaan kara dowladda federaalka, oo Islaamku u badan yahay. Waxaa jira xorriyad diimeed, laakiin midka kaliya ee si cad isu soo bandhigi karaa waa Islaamka.
Qof kasta oo arkay dokumentari dukumenti ah oo ku saabsan Imaaraatka Carabta ama mid ka mid ah dawladiisa wuxuu ogyahay inay jiraan laba xaqiiqo: midda taajiriinta iyo tan faqiirka. Kuwa dambe ayaa ka badan wax kasta shaqaale ajnabi ah oo u heellan warshadaha dhismaha. Hindida, Bakistaaniyiinta, dadka Bangaladesh ee ku arka hantida dadka kale meel fog. Tani waa gaar ahaan kiiska Abu Dani, Sarja ama Dubai, oo ah xarumaha waaweyn ee magaalooyinka leh dadka ugu badan ee degan.
ka Emiratis waxay matalaan 11% dadka deegaanka, hal milyan oo qof. Waxaa lagu qiyaasaa in 34% ka mid ah ay ka yar yihiin 25 sano ayna ka helaan gargaar weyn gobolka. Markaa kuwa kale ayaa jira shaqaale ajnabi ah, oo leh shaqooyin xirfad leh, Kuwa kasbada lacag fiican. Badanaa qaybta tamarta.
Ugu dambeyntii, Muxuu yahay xiriirka Emirates iyo adduunka intiisa kale? Waa in la sheegaa inay tahay waddankii saddexaad ee carbeed ee yeelanaya xiriir diblomaasiyadeed oo lala yeesho Israel, mana yara. Halkaan wuxuu ka taagan yahay mowqif kale oo ku saabsan khilaafka Falastiin iyo ka soo horjeedaa Iran. Xaqiiqdii, wuxuu Iran kula muransan yahay jasiirado qaarkood oo Imaaraadku sheegto inuu isagu ka tirsan yahay Marinka Omuz sidoo kale wuxuu ku eedeeyaa inuu dhiirrigelinayo mucaarad gudaha ah isagoo ka careysiinaya Shiicada tirada yar.
uu Dubai iyo Abu Dhabi oo kabtan u ahaa siyaasada arimaha dibada ee gobolka, isbahaysi dhaqaale, dhaqaale iyo siyaasadeed. Ha iloobin inay tahay a xulafada taariikhiga ah ee Mareykanka, tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay, iyo in halkan ay joogaan askar Mareykan ah oo la geeyay. Dhibaatooyinkeeda Iiraan ayaa sidoo kale u soo dhoweeyey Imaaraadka Carabta Sacuudi Carabiya, Dal doonaya inuu raaco wadadii guusha dhaqaale ee deriskiisa.
Isutagga Imaaraadka Carabta iyo dalxiiska
Sanadihii ugu dambeeyay, wadanku wuxuu ku rakibey khadadka dalxiiska, isagoo isku dayaya inuu ka faa'iideysto cimilo diiran, jasiiradeeda macmalka ah iyo haybada magaalooyinkeedas ka soo baxay cidlada. Shaki la'aan dadku waxay aadaan marka hore Dubai, Meel ay umuuqato in dakhliga dalxiisku horey usii dhaafay kan saliida.
Halkan dalxiisayaashu waxay la kulmi karaan xoogaa nolosha lamadegaanka ah, oo leh dalxiisyada 4 × 4 jeep, habeennada Carabta inta u dhexeysa dunta iyo gawaarida camello, ama dukaamaysi u aado ama baararka ka bax nolol-maalmeedka xiisaha badan.
Maanta, waa imaaradaha Ras al Khaima iyo Umm al Quwain oo raba inay horumariyaan dhaqaalahooda iyagoo gacmaha is haysta dalxiis. Dhanka kale, Fujairah waxay dooneysaa inay dekeddeeda ka dhigto xarun loogu talagalay ka ganacsiga badaha, Sarja waa caasimadda dhaqanka iyo waxbarashada, Ajmanna waxay u tahay xarun maraakiib iyo warshad.
Waxa la sugaaba waa haddii mar uu shidaalku dhammaado, sidii waligiis ahaan lahaa, waddamadan ay badbaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » Imaaraadka Carabta » Halka: Imaaraatka Carabta
Sida looga shaqeeyo wada shaqeyn miyiga tuulo cidla ah